Ndị ọzọ kachasị mma na n'efu na MS Office maka 2020 | Site na Linux
Ọ bụghị ihe nzuzo nye onye ọ bụla na n'ime ihe niile «Sistema Operativo», kacha jiri ihe niile nkịtị ọrụ bụkarị «Navegador web» na «Aplicaciones Ofimáticas», dị ka a Editọ ederede, a PDF faịlụ na-agụ ma ọ bụ nke a maara nke ọma «Suite Ofimáticas», nke bụ ihe ọ bụla karịa set (ngwugwu) nke ngwa ndị na-ekwe ka njikwa (okike, ọgụgụ, mmezi) nke faịlụ na akwụkwọ nke ọrụ kwa ụbọchị na ọfịs ma ọ bụ ụlọ.
Ya mere, ọ bụ ezie na ọtụtụ na-ejikarị «MS Windows» na ya kwekọrọ «Suite Ofimática»kpọọ «MS Office», eziokwu bu na ma, banyere nke a «Sistema Operativo» dika banyere «Distros GNU/Linux» na ndị ọzọ, e nwere ndị na-emekarị magburu onwe free na-emeghe ọzọ, ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ free, nke onye ọ bụla nwere ike iji rụọ ọrụ ọfịs na ogo na arụmọrụ.
Ma obu, nke ohuru gi Kọmputa weta «Windows 10» na ụdị ikpe nke Microsoft Office arụnyere, nke ị nwere ike mechara zụta ma ọ bụ nọgide na-eji na paireti ngwọta, ma ọ bụ weta «Mac OS» ya na «Suite Ofimática» Ana m arụ ọrụ, ihe kacha mma ga-abụ ịhọrọ iji a Free ma mepee Office Suite ma ọ bụ n'efu, ma ọkacha mma multi ikpo okwu.
Ya mere, n'okpuru obere nyocha ọ bụla maka ndị ọzọ mara mma na nke bara uru nke ọzọ «Suite Ofimáticas» ịtụle n’afọ a 2020 dị ka onye nnọchi maka «MS Office».
1 Free na free ọzọ na MS Office maka 2020
1.1 Free na Mepee
Free na free ọzọ na MS Office maka 2020
Free na Mepee
FreeOffice, onye kasị ochie, nke a maara ma jiri «Suite Ofimática» na GNU / Linux ụwa ugbu a na-aga maka ụbọchị a, site na ọnụ ọgụgụ nke mbipute 6.4.0 beta 1 maka ngalaba ule gị, ọnụọgụ nke 6.3.3 mbipute maka nkwụsi ike ya na ngalaba mmepe, na ọnụọgụ nke 6.2.8 mbipute maka ulo oru gi. Na nsụgharị maka «Windows, Mac OS y Linux» dị iche iche nke nwụnye faịlụ. Na mGụnyere maka ugbu a, nchịkọta ndị a: Dee, Calc, Mmetụta, See, Isi na Math.
"LibreOffice bu ulo oru di ike; ya interface dị ọcha na ngwá ọrụ dị ike na-enye gị ohere ịhapụ ihe okike gị ma mee ka arụpụta ihe gị. LibreOffice jikọtara ọtụtụ ngwa na-eme ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ Free na Open Source kachasị ike na ahịa: Onye edemede, onye nhazi okwu, Calc, mpempe akwụkwọ, Mmasị, onye editọ ngosi, Bịaruo, ngwa ịbịaru anyị na mpempe akwụkwọ, Isi, nchekwa data anyị na interface na ọdụ data ndị ọzọ, na Math maka idezi usoro mgbakọ na mwepụ".
Na nkenke, «Libre Office» bụ otu n'ime ihe kasị sie ike oru ngo nke GNU / Linux ụwa, na ihe magburu onwe, ọgbara ọhụrụ na enyi na enyi ọrụ interface, na a nyere na ngwa ngwa ibu n'ime Free na Open Source Software Ecosystem.
Kpọọ Calligra si na peeji nke ya bu a «Suite Ofimática» ekesa site abịakọrọ faịlụ (tar.xz) nke nwere koodu isi ya, agbanyeghị, enwere ike itinye ya ngwa ngwa site na nchịkọta nke ọtụtụ ndị ama ama «Distros GNU/Linux».
Ugbu a, ọ na-aga site na ọnụ ọgụgụ nke 3.1.0 mbipute maka alaka ụlọ ọrụ gị na ụdị mbipute gị 3.2.0 Alfa maka alaka mmepe gị. Otú ọ dị, na ya ị nwere ike nweta ya nwụnye faịlụ ka «MS Windows» en .msi usoro maka nsụgharị nke 32 na 64 ibe n'ibe, na agbanyeghị na enweghị faịlụ ntinye «Mac OS» Enwere ike itinye ya na ya, jiri njikwa ngwugwu a maara Homebrew.
Nke a «Suite Ofimática» bụ akụkụ nke Obodo KDE, nke n'aka nke ya, raara nye mmepụta nke Software efu. Ọ na-enyekwa usoro 8 zuru ezu nke na-ezute mkpa nlekọta ọfịs nke ọfịs nkezi, nke bụ maka ihe ndị a ugbu a: Okwu, Ogbo, Mpempe akwụkwọ, Ifuru, Kexi, ma na-agbakwunye na ndị ọzọ site na KDE Project, dị ka Karbon na Krita, gbakwunyere atụmatụ.
Ọfịs efu (onye na -eme nro)
Ọfịs Office (Ashampoo)
N'ime ndị a, ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị jiri kpọrọ ihe site na «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» nwa WPS y Ụlọ ọrụ n'efu, nke mere na ugbu a ha na ndabara, na opekata mpe 1 Linux Distro. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ndị a 2 «Suite Ofimáticas», anyị na-akwado ka ị gụọ isiokwu anyị gara aga banyere ha: WPS y Ụlọ ọrụ n'efu.
Ma ọ bụrụ na ịchọrọ naanị ka ọ bụrụ ọzọ ọrụ ọrụ ịntanetị, ebe nhọrọ ndị a dị:
N'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Ndị ọzọ kachasị mma maka n'efu na MS Office maka 2020
Manjaro Linux onye ọrụ kemgbe 2014 na onye ọrụ Linux kemgbe 2003. Obi dị m ezigbo ụtọ na mkpesa gị na ngwaọrụ ụlọ ọrụ nwere ike iru ogo ma ọ bụ karịa MS Office (LibreOffice na KDE Caligra suite) ma n'otu oge ahụ ọ bụ ebum n'uche m iji mejupụta nyocha gị. arụ ọrụ nke ngwa ọrụ ọfịs a yana ngwungwu akpaaka ọfịs abụọ abanyela na nchekwa Manjaro kemgbe 2017. Nke mbu gosiputara ma chikota ya site n'aka onye mmepe na onye ndozi Vitor Lopes (@codesardine https://vitorlopes.me/) a na-akpọ MS-OFFICE-Online nke na-enye gị ohere iji ọrụ nke Microsoft Office 365 nyere na ihe nchọgharị gị ma ọ bụrụ na ị nwere akaụntụ email na Outlook. Onye mmebe a tinyere ngwa a n'ime Jade Desktop Environment maka Linux.
Ihe ngwugwu nke abuo sitere na ulo oru OnlyOffice (https://www.onlyoffice.com/es/download-desktop.aspx), ya na ngwungwu Desktọpụ ya bụ naanịOffice Docuements, nke mere ka ọ gbakwunye ngwa ngwa dị mfe iji kwado faịlụ MsOffice na Linux. Ndị ọrụ nke Arch Linux, Manjaro, Debian na nkesa ndị ọzọ akọala nyocha dị mma ma ọ bụ nzaghachi nke ọnwa a gbasara ndakọrịta ha na usoro Microsoft mbụ. Enwere ike itinye ya na linux dịka Debian / Ubuntu, RPM na SNAP.
Daalụ maka nkọwa gị zuru oke ma magburu onwe ya.
Kedu nke kacha dakọtara na MS Office?
N'ime ndị niile m gbalịrị, enwere m ike ịsị na nke na-enye nkwekọ kachasị mma na usoro Microsoft bụ WPS Office, naanị ihu ala ọ nwere bụ na ọ bụ naanị.
Agbalịrị m WPS ma ọ dị oke mma. Ezumike, LibreOffice maka ihe niile.
Kedu ka ụlọ ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ?
Uchenna 885 dijo
Site na oge ikpeazụ m gbalịrị ya, enwere m ike ịsị na ọ nwere nnwekọ dị mma na ihe Microsoft, mana nsụgharị a na-akwụghị ụgwọ dị mfe ma ọ bụrụ na ịchọrọ nhọrọ ndị ọzọ dị elu ị ga-etinye ego na ụdị akwụ ụgwọ ya. Aga m agwa gị ka i lee LibreOffice anya nke ọma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ọtụtụ ndakọrịta na usoro Microsoft ị nwere WPS Office.
Anwalebeghị m Office Suite a mana interface ya dị mma nke ukwuu na nke MS Office. Echere m na ndakọrịta ya na faịlụ faịlụ ya ga-adị mma ịnweta ụdị ụgwọ. Ma ọ bụghị ya, m nwalere WPS ma ọ dị ka ọ dị mma.
Ihe ndị a niile na-efu efu ihe abụọ: onye njikwa PIM yana arụkọ ọrụ ọnụ
Mehiere, NaanịOffice ma ọ bụrụ na ọ bụ oghere dị na mbipụta Desktọpụ Editọ:
Ezigbo okwu na onyinye, Andrés!
Mgbe ikike m na MS Office gwụsịrị, etinyere WPS nke na-ekpuchi mkpa ọrụ ọfịs m niile, ka m na-arụ ọrụ na akwụkwọ otu, echere m na ọ bụ nke kachasị emetụta ndị ọrụ ndị ọzọ na-eji MS Office.
Ekele Pentras. Na-ekele gị maka ntinye okwu gị banyere ahụmịhe gị.
Ndewo, n'ihe banyere macros ahụrụ m na o doro anya na ọ kwekọrọ na nke MS Office, ị maara ma ọ bụrụ na ha dị na ụdị nnwere onwe ma ọ bụ iji ha mee ihe ị ga-enwerịrị ngwugwu adịchaghị?
Dịka ị pụrụ ịhụ, ọtụtụ na-ede n'asụsụ bekee achọghị kwa ngwaọrụ mmezi ma ọ bụ okwu yiri ya. The wp m arụnyere bụ na Bekee naanị. Abụ m onye edemede na Spanish ma ọ dị nwute na enweghị ụzọ ọzọ maka okwu, ozugbo enwere nke ka mma bụ Okwu zuru oke, mana ọ dị ka ha zụtara ya iji wepu ya na ọ naghị asọmpi microsoft. Agbalịrị m ihe niile na emepe, nke bụ distro m na-eji, ọ nweghị ụzọ, dịka ịwụnye mmanya na ịnwale nhọrọ nke ịwụnye okwu ọbụlagodi na ọ bụ agadi. Maka m, ihe bụ ezigbo akụkụ nke ụdọ maka ndị edemede bụ ịba uru nke okwu ndị ọzọ, ihe dị mkpa iji dee ya na akụnụba ya na nnwere onwe nwere ya ma ọ bụrụ na ezughi oke, edeghị nke ọma, na njehie, yana nhọrọ ndị na-abụghị nke iji ya eme ihe. Na 1998 echere m, edere m email na ọrụ ọfịs libre ka m gwa ha ka ha tinye okwu ọkọwa okwu nke okwu na nghọtahie, ọ juru ha anya na maka gịnị? Ha emeela ya na akụkụ ya, ọ were ọtụtụ iri afọ ee ee, ọ bụ ngwa nke na-esite na ụlọ ọrụ anaghị akwụ ụgwọ ma ọ dịkarịa ala na Spanish na n'ọtụtụ subprogram nke a ga-ebudata iche iche ma mara otu esi emebi ma tinye n'ime interface. Mana mgbe ahụ ihe nhụsianya ahụ dị nhịahụ n'ihe metụtara nhọrọ ma ha adabaghị n'okwu ndị a na-ekwu n'ihi na ha enyochaghị ma okwu ole na ole ha na-enye zuru oke. Ọ bụrụ na ha mere ezigbo ụlọ ọrụ, agaghị m emetụ windo aka ọzọ ma jiri suse mepere emepe na kọmputa kachasị m na-eji ede. Amaghị m ihe m ga-emekwu, amaara m na ọ dị mkpa mana ọ dị ka ndị mmadụ kwenyere na ha achọghị iji otu okwu.
Zaghachi razael casares
Daalụ Rafael! Ekwenyere m kpam kpam na gị n'okwu banyere Akwụkwọ ọkọwa okwu nke Synonyms nke LibreOffice na Office Office ndị ọzọ enweghị. Maka ndị anyị na-eji ọkụ ọkụ eme ihe, ọkachamara ma ọ bụ jiri ọrụ ederede, nke a bụ ebe a na-edozighị. Daalụ maka nkọwa gị bara uru.
Achịkọtara m ụlọ ọrụ 3 maka Linux maka ọrụ idezi akwụkwọ m dị iche. Otu n'ime ndị a bụ WPS Office, OnlyOffice (otu n'ime ọkụ na dakọtara na akwụkwọ MS Office) na Free Office, n'eziokwu ọ nwere interface dị ka nke ọfịs 2010 na 2019. N'etiti ndị a 3 m nwere ike ekpuchi m mkpa dị iche iche n'oge edere akwụkwọ m. Otu uru nke naanị na Free Office bụ na interface ha na Spanish. WPS Office na-efu obere ịgbanwe asụsụ interface, ma ọ bụghị na ihe niile dị mma!
Zaghachi Luis E
Ekele Luis! Daalụ maka okwu gị na onyinye ahụ enyere.
Mpempe koodu Java kachasị eji na Stack Overflow nwere njehie